Na LucidPix na - akwalite ngwaahịa gị - LucidPix
Lukwado LucidPix na ahia gi nke na ere
Lukwado LucidPix na ahia ahia gi
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ ụzọ iji bulie ahịa ha iru, ọkachasị na nlaazu akụ na ụba ugbu a. A na-eji ndị ahịa ịhụ otu ụbọchị ụbọchị, na otu anya na otu ọdịnaya, nke na-etinye onye nwe obere azụmaahịa, yana mmefu ego azụmaahịa obere, na ọghọm ozugbo. Enwere teknụzụ ọhụụ na-atụgharị ibe maka ọtụtụ azụmaahịa ma na-eme ka ihe ndị a dịkwuo elu; Ihe onyonyo 3D si LucidPix.
Site na nke a dị mfe iji ngwa, ndị ahịa azụmaahịa na ndị njikwa nwere ike ile anya nke ọma mgbe ha na-anyare ndị ahịa ọhụụ site n'ọnụ ụzọ. Naanị ihe ọ na-ewe bụ nbudata ngwa ngwa na pịa bọtịnụ, ị ga-enwe ike ikewapụ asọmpi ahụ. Photoskwado azụmahịa gị na Foto 3D nke LucidPix enweghị ihe mgbu na enweghị mgbali.
Mgbe ịbudatara na Ngwa LucidPix, ị ga - enwezi ike ịgbanwe ihe onyonyo gị ịbụ nke usoro nka na ụzụ ugbu a. Iji bido, mepee ngwa. N'ebe ahụ, a ga-agwa gị ka ịmepụta akaụntụ maka LucidPix ma ọ bụ banye na akaụntụ Google gị ma ọ bụ Facebook. Ozugbo ịbanye, nweere onwe gị ilegharị anya na ngwa na mụta maka njirimara ya.
Iji LucidPix App
Mgbe ọ na-abịa na ngwa ahụ, ọ nwere ike ime ka a novice dị ka tekinụ ọkachamara na otú ọ dị mfe. Na ntanetị peeji a, a ga-enwe akara ngosi atọ na ala ihuenyo gị na abụọ n’elu. Akara ngosi aka ekpe bu bọtịnụ homepage, nke ga-akpọghachite gị kpọmkwem na ya, homepage.
3D okpokolo agba
Igodo dị n'etiti ala ihuenyo gị bụ bọtịnụ okike. Nke a ga - eduga gị gaa na peeji nke enwere nhọrọ na ala ihuenyo ahụ, gụnyere “3D Frame” na “3D Photo”. Ga-ebido na peeji nke “3D Frame” nke ga-enye gị ohere iwere eserese na oge ahụ na ihu ma ọ bụ nzụlite mmekọrịta na-agagharị na-enye ihe onyonyo a 3D. Enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na maka esemokwu mmekọrịta gụnyere nri, ebe, ebe ndị njem na ihe ndị ọzọ. Ha niile bụcha ụzọ dị mma iji mee ka ahụmịhe gị nwee ọ funụ na ihe na-atọ ụtọ karị ugbu a na akwụkwọ gị na - adọrọ adọrọ ndị na - ege gị ntị.
Nhọrọ nke abuo bu “3D Foto” peeji ebe inwere onyonyo nke ino na ekwentị gi ma tuo ya dika onyonyo 3D, ma obu weputa foto 3D ohuru site na ngwa LucidPix. Naanị họrọ foto ịchọrọ ịtụgharị 3D. Mgbe ntughari oge ole na ole tụgharịchara onyogho ochie 2D gị na ogo atọ niile, na-enye gị ike ịkekọrịta ya n'ọtụtụ ụzọ na otu n'ime ọtụtụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi.
Sharingkekọrịta Okike ndi LucidPix
Ozugbo ị mepụtara 3D Photo na LucidPix, ị ga-enye ike ịkekọrịta ihe okike gị na LucidPix, Facebook, Instagram na ọtụtụ ozi na ngwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Họrọ otu ị choro ịkekọrịta na ala ihuenyo ahụ, ebe ị ga - ahụ ihe niile site na ịkesa ihe ngosi 3D nke gị; inwe ike ịkekọrịta onyonyo onyonyo atọ gị na Facebook, Snapchat, ma ọ bụ Instagram; na n'ikpeazụ ọbụna n'ịtụgharị ya na GIF ma ọ bụ vidiyo maka ịkekọrịta n'agbanyeghị ihe masịrị gị.
Mgbe ị na-ekekọrịta dịka GIF ma ọ bụ vidiyo, ị na-enwe ike ịkọwapụta mmegharị foto 3D. Ikekwe ihe okike gị na-akacha mma mgbe ị na-amị akụkụ ma ọ bụ na -eme ihe oyiyi. Foto ndị ọzọ nwere ike ịdị mma kachasị na orbit, na-anwale iji mara nke kachasị mma. N'otu aka ahụ, ịnwere ike ịhọrọ ịgha mkpụrụ ma ọ bụ kwụsịlata ngagharị 3D, na-enyere aka mee ka mmetụta 3D pụta na enyo n'ezie. Nhọrọ ndị a na-enye gị ohere iji LucidPix kwalite azụmahịa gị ngwa ngwa, na-ahụ na ị ga-enweta ntinye aka kachasị.
Profaili Onye ọrụ
Vinglaghachi na ntanetị mbụ, bọtịnụ ikpeazụ n'akụkụ aka nri nke akara ala bụ akara ngosi profaịlụ peeji nke. A na-enweta Feta 3D, Foto, na ntụgharị gị site na ịme ọpịpị akara ngosi iyi foto na ala aka nri ihuenyo ahụ. Na akuku aka nri elu nke ibe a, ntọala maka profaịlụ gi di.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ohere zuru oke na njirimara LucidPix na nhọrọ mbupụ ọ bụla, ịchọrọ ịghọ LucidPix Super User. Na ịpị bọtịnụ “Get Super” nke ọ bụla, ị ga - enye gị ike ịdenye aha na kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ. Dịka LucidPix Super User ị ga-enweta ohere zuru oke na ngwanrọ ahụ niile, gụnyere nzacha niile, Feta 3D, ọsọ mbupụ, mbupụ data 3D na ihe ndị ọzọ. Njirimara ndị a ga - enye gị ohere inwe ọtụtụ njikwa karịa na nsonaazụ LucidPix, na-enye nhazi nke bara uru nke nwere ike inye aka kwalite njikọ aka. Nhọrọ ndị ọzọ emechiri emechi site na ịdenye aha na LucidPix Super Onye ọrụ nwere ike inyere aka n'ezie mgbe ị na-akwalite azụmahịa gị, site na ijide n'aka na ndị ahịa gị hụrụ ihe ngosi 3D kachasị mma.
Sharingso na Osisi LucidPix
Igwe ikpeazụ nke dị na ntanetị bụ ntinye nke ngwa, nke na-enye gị ohere ịkekọrịta ihe okike gị na onye ọ bụla ọzọ na-eji ngwa LucidPix. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ foto 3D ị ga - achọ iji, yana omimi map nke kwekọrọ na foto ahụ, nye aha nna ukwu gị, ana - emecha ya. Mgbe otu anyị nyochachara ngwa ngwa iji hụ na ọdịnaya ahụ kwesịrị ekwesị, ọ ga-ekerịta ndị ọrụ LucidPix niile.
Zọ dị mkpụmkpụ, dị ụtọ ma dịkwa mfe, dịka otu onye ọ bụla chọrọ ka ọ dịrị. Ugbu a ị dịla njikere ịmalite ịkwalite LucidPix.
Ọ dị nfe itinye foto ọhụrụ 3D gị, yana n'otu aka ahụ ọfụma iji bulie onwe gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha na ha. Dịka foto ọ bụla ọzọ ị ga - eji, enwere ebe na oge kachasị mma ị nwere ike itinye pịnye onyonyo ka ọ bụrụ nsonaazụ kacha mma, ọ bụ naanị dabere n'ihe ị na - achọ dị ka onye na - akwalite. Wantchọrọ iwelata ọnụego bounce na ebe nrụọrụ weebụ gị? Jiri eserese 3D n’elu nke ibe gị iji dọta mmasị ndị mmadụ. You na-achọ mkparịta ụka ndị ọzọ na ibe mgbasa ozi mgbasa ozi? Kpoo ụfọdụ onyonyo 3D nke na-eme ka ndị mmadụ kwụsị ịpịgharị na ntanetị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ma were obere oge lelee post gị (ha na-enweta itinye aka karịa foto nkịtị!). Ọ bụ na ntinyeghị ọtụtụ njikọ njikọ ịchọrọ na mkpọsa email gị? Gbalịa itinye ihe onyonyo 3D n’ime ozi a ka ịbawanye pịa site na ọnụego.
Ohere ị nwere ike iji nwere ike enweghị njedebe, ịchọrọ ịmepụta ụda kwesịrị ekwesị na ozi gị na onyinyo gị iji sonye na mgbaru ọsọ gị. Ya mere, pụọ ebe ahụ gbanye ọrụ nkwado gị. Ngwá ọrụ ọhụụ a n’ime igbe ahịa gị nwere ikike ime ka gị na ụlọ ọrụ gị dịkwuo mma naanị site na iji ya. Na-echeta mgbe niile, mgbe gị na LucidPix na-akwalite, ị bụla nzọụkwụ tupu asọmpi ahụ.
Nrọ Azụ LucidPix Na Nrọ →← Etu esi etinye ma wepu 3D Frame